Gini mere mmanu olive ji adighi gi nma? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Mmanụ oliv dị mma maka gị - otu esi emezu
Mmanụ oliv dị mma maka gị - otu esi emezu
Gini mere mmanu olive ji adighi gi nma?
Abụba na abụba n'ọbara mgbe abụba-nri bara ụba - gụnyere nri bara ụba nammanụ oliv- nwekwara ike merụọ akwara anyị ma kwalite ọrịa obi n'ihi na ha na-abawanye mbufụt.
Mmanụ Olive Dị Mma Maka Gị? A na-ewere mmanụ oliv ka ọ bụrụ obi dị mma, mana ụfọdụ ọmụmụ na-egosi na ọ nwere mmetụta na-adịghị mma na akwara anyị. Mgbasawanye nke usoro ntụgharị, ma ọ bụ FMD, bụ ihe eji arụ ọrụ nke mgbidi mgbidi. Iri mmanụ oliv ka awa ole na ole gachara nwere ike ibute mbelata ọrịa na ụkwụ na ọnụ, nke na-egosi na mgbidi akwara anyị dị umengwụ.
Ọ pụtara na mmanụ oliv adịghị mma maka gị? O siri ike ịkọ ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ n'iji ule ọ bụla dị ka FMD. You ma ihe ọzọ nwere ike belata FMD? Mmega. ma ọ bụ ihi ụra.
Kedu otu idobe na FMD na akwara na-egbu ume si bụrụ akụkụ nke ihe dị mma, dị ka mmega ahụ ma ọ bụ ihi ụra? n'ihi na ihe ndị dị ka mmega ahụ na nri na mba ofesi na-emetụta physiology anyị ma na-ebute ọtụtụ mgbanwe dị iche na ahụ anyị, dịka ọmụmaatụ mmanụ oliv nwekwara ike belata ụmụ irighiri mkpali. ọ nwekwara ike belata mmụba nri mgbe nri na LDL cholesterol. Isi okwu bu, site n’ilekwasị anya na otu pikselụ, anyị nwere ike tufue nnukwu foto.
Leekwa ihe atụ ọzọ: ọbara mgbali elu adịghị mma. ma ọbara mgbali elu anyị na-arị elu n'oge mgbatị ahụ nke na anaghị eme ya ahụike. You Ma Ihe Ọzọ Na-akpata Ọbara Mgbali? Mmekọahụ. chere kedụ ka anyị si mara? n'ihi na ndị ọkà mmụta sayensị nwere obi ike na-amụ banyere ndị mmadụ n'ime ụlọ ihi ụra n'oge ha na-enwe mmekọahụ.
Ọ dị mma, ntakịrị egwu. ha lere anya n'ọnọdụ dị iche iche nke mmekọahụ. Malesmụ nwoke ndị dị n'elu na n'okpuru na-ebuli ọbara mgbali elu n'otu aka ahụ, yabụ ndị nyocha ahụ anaghị atụ aro. ndo, njakịrị ndị ahụ dee onwe ha.
Nye kwuru na sayensị na-agwụ ike? Ọ dị mma, ị nweta isi ebe anyị na-ekpebi ma ihe ọ dị mma maka anyị ka ọ bụ ihe ọjọọ maka anyị dabere na ihe akaebe niile, foto zuru ezu. Ihe a na-elekwasị anya na akpa data bụ ihe mere ndị mmadụ ji enwe mgbagwoju anya banyere nri oriri. Anyị anaghị ekwu na ọrụ FMD na akwara adịghị mkpa, mana FMD jikọtara ya na ihe gbasara ọrịa obi ka anyị anaghị emegide ya. ma ọmụmụ ihe ogologo oge nke na-enyocha mmetụta nke mmanụ oliv maka ọnwa egosiwo mmelite na ọrịa ụkwụ na ọnụ, ọ bụghị njọ.
Ihe omuma a weputara omumu abuo ma kwubie na dilation, ma obu oria na onu onu, abawanye na ndi mmadu nwere mmanu mmanu oliv, na ihe omumu ndia diri otutu ọnwa, obughi nnukwu mgbanwe mgbe ha richara nri. Ugbu a, enwere m obere obi abụọ banyere nkwupụta ahụ, ụfọdụ n'ime ọmụmụ ihe ndị a na-eji obere mmanụ oliv, ndị ọzọ nwere esemokwu dị iche n'etiti ndị nwere ike ịmegharị ihe. Ya mere, anyị nwere ike inwe obi abụọ banyere nzọ mmanụ oliv na uru ya, mana ihe akaebe anaghị akwado nkwado na-arịa ọrịa ụkwụ na ọnụ na-adịte aka.
Ya mere, ịsị na mmanụ oliv na-ebute ọrịa obi n'ihi na ọ na-ebute ọrịa ụkwụ na ọnụ dị ka ịsị na mmega ahụ na-ebute ọrịa obi n'ihi na ọ na-eme ka ọbara mgbali elu, ma ọ bụ iri apụl na-akpata ọrịa shuga n'ihi na ọ na-eme Nnukwu ọbara na ọbara. ọ bụ ikpere-jerk sayensị. na echiche ndị a niile gbasara FMD, ma obere oge ma ogologo oge, ka na-efunahụ ya: na na njedebe nke ụbọchị anyị chọrọ ịma ihe egwu nke ọrịa n'ezie, ọ bụghị ihe nrịbama.
Gịnị bụ mmetụta mmanụ oliv na ọrịa obi? Ndị mmadụ na-eri mmanụ oliv karịa nwere nsogbu dị ala nke ọrịa obi yana ọnwu ịnwụ nke ihe ọ bụla. na-ntu ya dika nke a? Mmanụ Olive Dị Mma Maka Gị? anyị enweghị ike ịdaba na nkwubi okwu ebe a. ọ nwere ike ịbụ ihe ndabara.
Ndị na-erikwu mmanụ oliv nwekwara ike iri obere butter ma ọ bụ na ha nwere ike iri salad karịa ma eleghị anya omume ndị ahụ na-eme ka ahụ dịkwuo mma, ọ bụghị mmanụ oliv n'onwe ya. Ọzọkwa, anyị kwesịrị ileba anya na ihe akaebe niile ma ọ bụghị akpa data site na gburugburu. Ihe anyi choro bu iji aka ike kewaa ndi mmadu ma gwa ha ka ha rie mmanu oliv karie ma gha eme. a na-akpọ usoro a na-achịkwa aghara aghara. nke na-ewepu ọtụtụ obi abụọ.
Ihe kacha mara amara bụ PREDIMED, nke na-ekwu maka nri ndị Mediterranean na-agbakwunye na mkpụrụ ma ọ bụ mmanụ oliv. Ha hụrụ uru ndị yiri ya, obere ihe gbasara ọrịa obi, na ha abụọ, mana PREDIMED nwere ndaputa na akụkọ aghụghọ, yabụ anyị ji nlezianya were nke a. nyocha ndị ọzọ na-egosi na mmanụ oliv nwere ike imezi ogo glucose ma gbochie nrụgide oxidative.
Ugbu a, anyị nwere ike inwe obi abụọ ma kwuo na data ahụ edochaghị anya, echeghị m mmanụ oliv dị mma maka anyị. echeghị m na nke ahụ bụ enweghị ezi uche. mana ahụghị m otu anyị ga - esi arụ ụka na mmanụ olive na - ebute ọrịa obi na mmanụ oliv dị njọ nye anyị, megidere ọtụtụ ihe akaebe. nke ahụ abụghị ihe akaebe dabere. enweghịkwa m ịnyịnya n’ọsọ a.
Adịghị m akwado ma ọ bụ megide mmanụ oliv. Anaghị m azụ ya n'onwe m, ọ bụghị n'ihi na echere m na ọ ga-egbu m, kama n'ihi na ahụghị m mkpa. Mana nke a bụ oku onwe onye, ​​ọ pụtaghị na anyị ga-eme ihe.
Ka anyị leba anya na data ahụ nke ọma, gwa ndị mmadụ eziokwu niile ma hapụ ha ka ha jiri aka ha kpebie. Ugbu a amaara m ọtụtụ ndị na-ele edemede m, dị ka ịrapara na nri zuru oke, wee nweta abụba ha site na mkpụrụ, mkpụrụ, na avocados. Ọ dịghị onye ga-arụ ụka megide ya, ị na-eme ihe ọzọ, mana ị bụ unicorn yana ajụjụ a bụ ma ọ bụrụ na 99% nke ndị nọ ebe ahụ ga-akwụsị iri oliv ụnyaahụ ma ọ bụ na ha ga-arịa ọrịa obi na m ahụghị otú anyị nwere ike isi mee ya nwere ike ịrụ ụka.
Chere obere oge, kedu maka calorie? A na-etinye mmanụ oliv na kalori, ọ bụghị ya? Kpamkpam. Calorie 9 kwa gram. Ọ dịghị ihe ọ bụla nwere calorie karịa nke ahụ.
Maka onye ọ bụla nwere nsogbu ibu, nke a bụ ihe ị ga-elezi anya. ma anyị kwesịrị ịghọta ihe anyị na-ekwu. Mmanụ oliv adịghị agba kwa ele.
Ọtụtụ ndị na-eri nri keto na nri nwere abụba dị elu na-eri mmanụ oliv dị ukwuu ma ka na-ebu ibu n'ihi na ha ka na-adịkarị obere kalori. Chọpụta, ihe ọ bụla ọzọ, ma ọ bụrụ na mmanụ oliv bụ otu ihe na-agbakwunye calorie, ọ bụrụ na ị jiri ya rie nri ọ bụla, ọ na-agbakwunye ngwa ngwa, mana nke ahụ apụtaghị na mmanụ ahụ adịghị mma. Ọ bụ a stratejik mkpebi.
Maka ụfọdụ ndị, mkpocha mmanụ nwere ike ịbụ ụzọ dị mfe iji belata calorie, ebe ndị ọzọ nwere ike ịnọgide na-enwe ahụ ike ma ọ bụ belata ya mgbe ọ dị na mmanụ. ha niile dabere n'otú ị si ahazi nri gị. mana mmanụ olive adịghị abụ ọgaranya n’ezie na abụba juputara? na abụba zuru oke dị njọ, nri? Nke a apụtaghị na mmanụ oliv adịghị mma maka anyị? Ee, ọ dị elu, 14% nke calorie sitere na abụba abụba. ma cashews bu 13% macadamia nuts 15% Brazil nkpuru kariri 20.
Yabụ ọ bụrụ na anyị ewepu mmanụ oliv maka ọdịnaya abụba ya zuru oke, anyị ga-ewepụkwa ụfọdụ mkpụrụ. ha nwedịrị ike inye aka gbochie ya. Yabụ ee, abụba zuru oke bụ nsogbu ziri ezi n'ozuzu ya, mana ọ dị ntakịrị karịa.
N'ezie, otu abụba zuru ezu na-abịa n'oge na-adịghị anya. Ugbu a, ka anyị kwuo na anyị na-eche echiche nke ọma na ụdị nri niile ma ọ bụ n'ụkpụrụ nri. Kedu nri na usoro iri nri siri ike ma bụrụkwa nke na-anaghị arụ ọrụ nke ọma na obere mgbagwoju anya.
Ọ dị mma ọtụtụ ndị kwenyere n'echiche a nke mmanụ oliv dị njọ maka gị, ha jikọtara ya na ọrụ ụfọdụ ndị dọkịta a ma ama dị ka Caldwell Esselstyn na Dean Ornish na nke a laghachiri na ọmụmụ ha ebe ha na-ebelata na ala dị ala abụba na-eri akwara ncheta ma ọ bụrụ na ị chọpụtala ọrịa obi na ịchọrọ ịnwa ịgbanwe ya ma kpọọ ya na nchekwa, enweghị mmanụ, nri abụba dị oke ala, anaghị m ahụ nsogbu na nke ahụ. Enwere m ike ime otu ihe ahụ na akpụkpọ ụkwụ gị Mana nke ahụ ọ pụtara na anyị ga-agwa ụwa niile na mmanụ oliv bụ nsi? Enwere ụdị echiche a na nri ị chọrọ ịbụ oji na ọcha, ha niile ma ọ bụ ihe ọ bụla, nke ahụ na-ebute nnukwu ọgba aghara. eziokwu bụ na e nwere ọtụtụ nuances na ọdịiche onye ọ bụla.
ndị na-ewu igwe kwụ otu ebe
Lee akwụkwọ a na nri esemokwu maka ahụike obi. Ha tinyere mmanu oliv na-amaghi aka n'ime ndi bara uru ma kwado ya ka o buru oke ibu. Ha na-ede, “Enwere ihe akaebe na-agbanwe agbanwe na-egosi mmetụta ọ bara uru na ihe nrịba egwu maka ọrịa obi, yana ọrịa na ọnwụ. enwere ihe akaebe zuru oke iji kwado ya, mana onye na-eche, nri? Ndị edemede a chere na mmanụ oliv bụ ezigbo echiche, tụkwasịrị Esselstyn na Ornish obi banyere chi dị na Olympus, anyị achọghị ịma ihe ndị ọzọ na-ekwu.
Iwu? ewezuga Esselstyn na Ornish bụcha ndị so dee ederede a. e wepụtara ya na 2017, ogologo oge ka Ornish na Esselstyn bipụtara nnwale ha na-egosi ngbanwe ederede. Ya mere, ọbụna aha nke enweghị mmanụ na-egosi na enwere nuances na ihe akaebe anaghị ekwu na mmanụ oliv adịghị mma maka anyị, oge. ọ dabere n'ọtụtụ ihe. ihe banyere lipids ọbara? Cholesterol na ndị dị otú ahụ. ọ bụ n'ezie bụghị ibu doro anya.
Ahụla m ọmụmụ ebe ịgbakwunye mmanụ oliv enweghị mmetụta na lipids ọbara na ụfọdụ na-atụ aro uru na ọnọdụ ụfọdụ ebe ndị ọzọ na-egosi na mkpụrụ dị irè karị na iweda cholesterol zuru ezu na triglycerides karịa mmanụ oliv. Ya mere ọ bụrụ n’ikpebie ịga mmanụ olive ụfọdụ ma nwee ọmarịcha ọbara ọgbụgba, anaghị m ahụ nsogbu. Ma oburu na inwere nsogbu cholesterol ma ugbua ileba anya na isi ihe oriri na-edozi ahụ (nke anyị kpuchie n'isiokwu gara aga) na ọkwa gị ka ọ bụghị ebe ịchọrọ ka ha bụrụ, mgbe ahụ mmanụ oliv bụ ihe ịchọrọ ịnwale na lee ma o mere ihe di iche nye gi.
Ọ dị mma, olee maka iji mmanụ oliv esi nri? Ọtụtụ mmadụ na-ezo aka na ebe anwụrụ ọkụ, nke bụ ọnọdụ okpomọkụ nke mmanụ na-amalite ịgba ọkụ, nke dị gburugburu 200 Celsius, mana enwere nsogbu ọzọ nwere ike. Egosiputa mmanu mmanu eji eme ka ihe di elu nke glycation di elu, ma obu AGE. ha bụ ogige kemịkal nwere ike ịrụ ọrụ pro-oxidative.
Ọbụna esi mmanụ oliv na 100 Celsius Celsius maka naanị nkeji ise zuru ezu iji bulie AGE. Nke a bụ obere igbe ojii n'ihi na anyị amaghị kpọmkwem ọnụ ụzọ bụ nke AGE ga - abụ nsogbu, yabụ ọ ga - ekwe omume na mmụba a nwere ike ọ gaghị eme ihe gbasara ahụike, mana ọ bụrụ na ịhọrọ mmanụ oliv ma kpọọ ya egwu ị nwere ike nwee ya na salad gị ma ọ bụ isi nri. Eleghi anya obụpde na akwukwo nri efere ma ọ bụ mmiri. ụfọdụ ndị mmadụ na-asọ mmiri mmiri. na uzuoku na esi nri yiri ka ha ghaghi AGE. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nwere mmanụ oliv ma nwee nhọrọ, họrọ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke. ọ bara ọgaranya na polyphenols na ọtụtụ ọmụmụ egosila mmetụta bara uru karị na mmanụ polyphenol bara ọgaranya na-abụghị nke nsụgharị ndị a nụchara anụcha dịka mmanụ oliv dị mfe.
Isi okwu ikpeazụ m chọrọ ikwu: Nri kwesịrị ịgbanye na ụwa n'ezie. Maka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị mmadụ nọ n'ebe ahụ, ị ​​moreụkwu mmanụ oliv ga-abụ nnukwu nkwalite, ọ bụrụhaala na ọ na-anọchi abụba ndị ka njọ. Fọdụ agha ọjọọ nri m hụrụ na soshal midia abụghị maka shuga ma ọ bụ anụ ezi.
Were na-ekwu maka mmanụ oliv na ejiri m n'aka na m ga-anụ ụfọdụ okwu na nkwupụta ahụ n'ihi na isiokwu a na-emebi nku ya mgbe niile ka m gbasaa alaka oliv (onye ezubere) na ọ dịghị onye chọrọ mmanụ oliv. ọ bụ nhọrọ. Ọ ga-ekwe omume na mmanụ oliv adịghị mma maka gị, mana ọ nwere ezi uche maka onye ọzọ.
N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, mmanụ oliv dị mma maka gị ma ọ bụ ihe ọjọọ maka gị, ọ dịchaghị mkpa banyere mmanụ ahụ na ihe banyere gị. Maka ozi ndị ọzọ banyere ụdị abụba dị iche iche na ahụike ha, lee isiokwu a. Nke a na-elekwasị anya na abụba jupụta
Otu ngaji mmanụ oliv dị gị mma otu ụbọchị?
Olee Otú Naanị Ọkara aTebụl Olive Mmanụ a .bọchịNwere Ike Imezi ObiAhụike. New nnyocha na-egosi na-agbakwunyemmanụ olivna nri na - eduga na nsonaazụ obi. Mgbeahụikeuru nkemmanụ olivbụ ndị a maara nke ọma, ndị nchọpụta chọtara otu ihe ọma na nsonaazụ ndị ọzọgbasiri ikeakwukwo nrimmanụ.Bọchị 5, 2020
You maara na a kọwara mmanụ oliv mmanụ dị ka ọla edo mmiri na akụkọ ihe mere eme Greek? Nnyocha e mere na nso nso a egosiwo na enwere ike inwe ihe kpatara nke a. Mmanụ oliv nwere ọtụtụ ihe nwere ike ịrụ ọrụ ebube maka ahụike gị. Ọ bụ ngwa mgbakwunye ọ bụghị naanị na-atọ ụtọ na ọkwa ọhụrụ, kamakwa na-ewusi ahụike gị ike.
Na mgbakwunye, eziokwu ahụ bụ na enweghị kemịkal esichara ike bụ mmalite nke ọrụ ebube ya. N’isiokwu nke taa, anyị ga-agwa gị ihe uru ndị a dị ịtụnanya bara. Site na ịkwalite ahụike obi, igbochi ọrịa shuga, igbochi kansa, nsogbu akpụkpọ ahụ inwe ezigbo ntutu na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, lelee anya na njedebe ịchọpụta ihe niile.
Mee ka mgbasa ọbara dịkwuo mma: Ogige botanical na oliv nwere ike ime ka nitric oxide na-emepụta yana arịa ndị ahụ na-arụ ọrụ site na ịkwalite mmịba ọbara na anụ ahụ gị. Nke a bara uru maka ahụike dị mkpụmkpụ na ogologo oge, ebe ọ bụ na mmịpụta ọbara ka mma na-eme ka ihe niile dị mma site na sprin na mgbatị ahụ gaa n'ihe ize ndụ gị na-arịa ọrịa na-adịghị ala ala. Varietiesfọdụ mkpụrụ oliv nwekwara ike inye 25% nke mkpa gị, ihe dị mkpa nke na-enyere oxygenate akụkụ gị aka.
Na-egbochi Gallstones: Nnyocha e mere na nso nso a egosiwo na ịmịcha mmanụ oliv, ihe dị ka tablespoons abụọ kwa ụbọchị, nwere ike belata ohere ị nwere imepụta gallstones. Otu ihe dị na mmanụ oliv na-egosi na ọ na-enyere aka belata ogo ọkwa cholesterol na ọbara na gallbladder. Nnukwu mmanụ oliv na ihe ọ lemonụ lemonụ lemon, yana nnu Epsom, bụ ihe ndị a na-ejikarị eme mmiri na-agba gallbladder, nke kwesịrị iwepụ nkume gallstall.
Mma ahụ ike: mbọ nwere ike a. kwuo ọtụtụ ihe gbasara ahụike gị. Y’oburu n’ile gi anya, lelee ntu gi.
Ihe nzuzu, adịghị ndụ, mbọ na-akụ ụfọdụ bụ nsogbu anyị na-ezute. Mana ịmara na mmanụ oliv nwere ike imezi ahụike ntu? Ọ bụrụ na ị ga - eme ihe ngosi nka a na - ewu maka agbamakwụkwọ ezigbo enyi gị, ihe mbụ ị ga - eme bụ lezie mbọ gị anya ka ọ dị mma. Vitamin E na mmanụ oliv nwere ike ime ka mbọ nke ọrịa na - emetụta.
Were ngaji abụọ ma ọ bụ atọ nke mmanụ oliv ma gbanye akwa bọọlụ na ntu ya na mbọ. Can nwere ike ịhapụ ya ihe dị ka nkeji 30 tupu ịsacha ya. Ndepụta a na-amasị gị ruo ugbu a? Ọ dị mma, nọgidenụ na-ele anya n'ihi na e nwere ọtụtụ ezi ihe ndị ọzọ na-abịanụ, mana tupu ịga n'ihu, echefula ịdenye aha na ọwa anyị maka isiokwu ndị ọzọ dị ka nke a ma kụọ akara mgbịrịgba ka ị ghara ịhapụ mmelite ọ bụla! Mee ka Ahụike Obi Dịkwuo Mma: N'otu nnyocha, ndị ọrịa 165 nọ n'ihe ize ndụ dị ukwuu maka ọrịa obi na-eri nri dị ukwuu na mmanụ oliv.
Ndị ọrịa a belatara ọbara mgbali, cholesterol zuru ezu, cholesterol dị ala, na triglycerides. Tomato ihendori eji mmanụ oliv wusie ike nwere mmetụta dị ukwuu n'ihe metụtara obi obi karịa naanị isi ihendori tomato. Mmanụ oliv na-eme ka ihe ndị na-eme ka a ghara ịdị na-abụ abụba ndị na-ebelata ihe ndị dị n’uko, meekwa ka mkpụrụ ndụ gị ghara ịta ahụhụ.
N'ime ụmụ nwanyị ndị anaghị ese anwụrụ, egosiri na mmanụ oliv na-ebelata ogo nitric oxide na ọbara yana endothelin-1. Nke a na-akọwa mmetụta antihypertensive nke mmanụ oliv na ụmụ nwanyị hypertensive. Mmanụ oliv na-emekwa ka cholesterol dị elu buru ibu.
Ọ na-ebelata mmebi nke oxyidative na lipids, na-ebelata mbufụt, ma na-arụ ọrụ anụ ahụ. Na-ebelata ihe ize ndụ nke ịrịa ọrịa shuga: nri Mediterranean na-eji mmanụ oliv dị ka isi abụba. Akwadoro ka eji nri a iji meziwanye akara shuga.
Nri a na - ebelata ihe ize ndụ nke ịrịa ụdị ọrịa shuga abụọ site na 20 rue 23%. N’otu nnyocha, mmadụ iri na otu buru oke ibu na ndị na-arịa ọrịa shuga tinyere mmanụ oliv na nri ha, nke na-ebelata shuga shuga ngwa ngwa. Nri kwa ụbọchị mekwara ka usoro metabolic na ụdị ọrịa shuga abụọ dị oke ibu ka mma.
taya igwe ikuku
N’otu nnyocha, ndị okenye meworo okenye nwere ike ịnwụ ọhụhụ ụzọ n’ihi nri shuga ka etinyebere na nri mmanụ olive dị elu. Ha anaghị ahụ ụzọ nke ọma karịa ndị na-emeghị ka mmanụ oliv ha dị elu. Na-enyere Aka Fightgụ Ọrịa Cancer: Dị ka ọmụmụ si kwuo, oliv na mmanụ oliv nwere ọtụtụ antioxidants n'ụba.
Ha bụ ụfọdụ n'ime nri kachasị mma dị na antioxidants, ọkachasị ndị na-ekpughereghị usoro ọkụ dị elu. Ma oliv na mmanụ oliv nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-egbochi ọrịa cancer dịka squalene na terpenoids na lipid oleic acid na-eguzogide ọgwụ peroxidation. Ndị na-eme nchọpụta chere na ọ ga-abụ na oke oriri oliv na mmanụ oliv na ndịda Europe bụ ihe dị mkpa na-eweta mmetụ dị mma nke igbochi kansa na ahụike na nri Mediterranean.
Mma ahụ ike: A bịa n’ịma mma, ọtụtụ n’ime anyị na-a swearụ iyi site n’ihe ndị sitere n’okike. Naanị ihe anyị chọrọ bụ ka ọ na-enwu gbaa. N'agbanyeghị ole creams e nwere na shelf gị, anyị na-eji mkpụrụ osisi ma ọ bụ ihe ọ juiceụ juiceụ ihe ọ vegetableụ vegetableụ akwukwo nri wepụ maka ngwa ngwa.
Mmanụ oliv nwere vitamin E, nke na-eme ka ahụike anụ ahụ dịkwuo mma site na ịgwọ mbufụt, ihe otutu, na ichebe akpụkpọ ahụ site na ọrịa ndị siri ike dịka psoriasis na ọrịa kansa. Gwakọta iko iko yogọt, ¼ iko mmanụ a honeyụ, na ngaji mmanụ oliv abụọ nke ọma ruo mgbe ị ga-enweta nnukwu azịza. Tinye ihe ngwọta a na ihu gị ma hapụ ya ihe dị ka nkeji 20.
Were mmiri luara ara saa ya. Nwere ike iji ọgwụgwọ a otu ugboro n'izu. Mmanụ aeyụ na-eme ka ume ọkụ, ebe yogọt na-eme dị ka ihe na-eme ka anụ ọkụ, na-eme ka ahụike nke anụ ahụ dịkwuo mma.
pink ileghara nsọ
Na-enye gị usoro mgbaze ahụike dị mma: Ndị antioxidants na ndị na-egbochi mgbochi mkpali dị na mmanụ oliv nwekwara mmetụta na sistemu nri. Ejikwuola oriri mmanụ na-abawanye na ọnụọgụ cancer na eriri afọ. Polyphenols dị na mmanụ oliv na-enyekwa aka ijigide nguzozi dị mma na akụkụ nri site na ime ka uto nke nje na-emerụ ahụ nwere ike ibute ọnya na mbufụt na mkpuchi nke afọ, gụnyere ncheta ọhụụ na okwu ire okwu.
Nnyocha ụlọ nyocha atụnyekwara njikọ nwere ike ịdị n'etiti oriri mmanụ oliv na ikike ụbụrụ iji dozie ogo mmiri na usoro ọrụ ụjọ nke etiti. N’ikpeazụ, mmanụ oliv nwere ike inye aka gbochie ọrịa Alzheimer site na ime ka ihe ncheta ụbụrụ ghara ịda mbà na mmepụta nke enzymes protein bara uru na ụbụrụ. Ọ bụ ezie na ule ahụ abụghị nke ikpeazụ, eziokwu ahụ bụ na mpaghara Mediterenian nwere otu n'ime ọnụọgụ Alzheimer kachasị ala n'ụwa yiri ka ọ na-akwado nkwubi okwu a na nri dị elu na abụba abụba na abụba abụba monounsaturated dị na mmanụ oliv.
Ọ bụ ezie na mmanụ oliv abụghị naanị mmanụ sitere na osisi nke nwere ụdị abụba a, ọ nwere ihe kachasị elu. Nnyocha na-egosi na mmanụ oliv nwere ike ịnwe mmetụta nchebe pụọ n'ihe ize ndụ nke ịda mbà n'obi, ọbụlagodi mgbe imega ahụ na ahụike ọgụgụ isi zuru oke. N’otu nnyocha, ndị na-a oilụ mmanụ oliv nwere ihe ize ndụ nke ịda mbà n’obi dị pasent 48 dị ala karịa ndị na-a regularlyụkarị abụba trans.
Mee ka nlekọta ntutu na ntutu isi dịkwuo mma: Mmanụ oliv bụ ihe okike magburu onwe ya maka nlekọta ntutu, ahụike na nlekọta kwesịrị ekwesị. Uru ntutu mmanụ oliv gụnyere idozi ntutu mebiri emebi, belata ntutu, iwepụ ntutu isi, na ibelata esemokwu n'etiti ntutu. Itinye ngaji ole na ole na ntutu gị na ntutu isi gị ga-enyere aka belata dandruff, ero, na ịkpụcha ntutu nke dandruff, akọrọ na anụ ọkụ.
Hairdị ntutu niile na-amịrị acid na abụba abụba nke ọma. N'ihi nke a, a na-eji mmanụ ndị dị mkpa dị ka mmanụ aki oyibo na mmanụ ube oyibo agwọ ntutu isi. Nchịkọta abụba dị mma na vitamin na mmanụ dị mkpa na-enyere aka ịbanye n'ime ntutu gị, kpọchie mmiri ma chebe ntutu gị.
Nnyocha egosiwo na ị nwere ike ịgwọ ntutu gị na ube oyibo na mmanụ oliv. Izizi butere ube oyibo n’ime nnukwu efere wee gwakọta n’ime tebụl mmanụ oliv. Mgbe ube oyibo dị njikere, tinye ya na ntutu gị site na mgbọrọgwụ elu.
Mgbe ahụ kpuchie ntutu gị na mkpuchi ịsa ahụ wee hapụ ya maka 15 ruo 30 nkeji. Mgbe mmanụ ndị dị mkpa malitere ịmalite ntutu gị. Itucha na mmiri ọkụ.
Nwere Njirimara Na-egbochi Ọrịa Na-egbu Mmetụta: E gosipụtara oriri mmanụ iji belata mbufụt na-adịghị ala ala ma belata nrụgide oxidative. A maara na mbufụt na-adịghị ala ala bụ ihe na-akpata ọtụtụ ọrịa, gụnyere ọrịa ara ure, ọrịa obi, Alzheimer, ọrịa shuga, ọrịa metabolic, ogbu na nkwonkwo, na ọbụna oké ibu. Nnyocha na-egosikwa na mmanụ oliv dị elu na antioxidants dị ka oleic acid.
Ndị antioxidants a nwere uru ahụike gbakwunyere nke mbenata mbufụt na akara nke mbufụt na ọbara, protein C-reactive, ma ọ bụ CRP. Na-enyere Aka Young Nọ Na-eto Eto: Mmanụ oliv jupụtara na polyphenols, ụdị antioxidant metụtara ihe na-egbochi ọrịa - usoro dị mgbagwoju anya nke sayensị na-aghọtachaghị, mana ọmụmụ mmalite gosiri na polyphenols nwere ike inye aka belata ụfọdụ akara ngosi nke ịka nká na ọrịa metụtara afọ. iji belata ma ọ bụ laa azu. Ọ pụtara na mmanụ oliv nwere ike ịbụ isi iyi ntorobịa.
Enweela ya na mbenata wrinkles na afọ, yana igbochi ịka nká nke na-eduga n'ọrịa na-adịghị ala ala n'oge na-adịghị anya.High mma mmanụ oliv na-amaghị nwoke, nke a na-agbanye na mmanụ n'oge na-adịbeghị anya n'oge oliv, nwere ọkwa polyphenols kachasị elu. olive mmanụ so n’ihe ị na-eme kwa ụbọchị? Gịnị bụ mmanụ nri gị kacha amasị gị? Mee ka anyi mara na ngalaba nke di n'okpuru!
Ole mmanụ oliv kwa ụbọchị dị mma?
Tablespoons anọ nkeMmanụ olivkaụbọchịmakaezigbo ahụike
Na-eri iheMmanụ olivnwereọtụtụuru maka anyịahụike: ọ na-eme ka ọrụ obi, na-egbochi ọrịa obi, na-ebelata ohere nke ọrịa akwara na ọbụna na-enyere anyị aka inwe obi ụtọ.
Hey ụmụ okorobịa, nke a bụ Dr. Ax, onye guzobere DrAxe.com na Doctor nke Nkà Mmụta Ọgwụ.
Taa achọrọ m ịza ajụjụ a bụ mmanụ oliv dị mma ma kwuo maka ọtụtụ uru ahụike nke mmanụ oliv Mee ka ị mara, mmanụ oliv nwere ike ịbụ nri dị egwu. Nsogbu bụ na 98% nke mmanụ oliv taa abụghị ezigbo mmanụ oliv na-amaghị nwoke. Ọ bụ ya mere ọtụtụ mmanụ oliv taa ji adịgboroja ma nwee ike nwee ụfọdụ uru ahụike na-adịghị mma.
N'isiokwu a, m ga-akụzikwara gị na njedebe na-egosi gị otu esi ahọrọ ezigbo mmanụ oliv. Mụ na nwunye m, Dr. Chelsea, nọ na Tuscany afọ ole na ole gara aga ma anyị nọ na mpaghara a na-akpọ Cinque Terre na m nwere ụfọdụ pesto na mmanụ oliv ha wee cheta m ijide ma na-anụ mmanụ oliv.
Ọ na-esi isi ma na-anụ ụtọ dịka ahịhịa ọhụrụ na-agbapụta n'ọnụ m site na isi nwanyị ahụ siri ike ma sie ike, m kwuru, 'Wow. Ọ bụ mmanụ kacha mma m nwetụrụla. 'Ekwuru m,' Ọ dị ka ihe ọ bụla ọzọ m gara na US 'na otu n'ime ihe m malitere ime ọtụtụ nyocha n'oge njem ahụ na mgbe m laghachiri njem ahụ achọpụtara m na ọtụtụ mmanụ oliv bụ Taa na mmanụ ndị ọzọ dị ka mmanụ soybean, mmanụ canola bụ mmanụ, yabụ na ọ dịghị mma maka gị, ọ na-egbu egbu na ahụ, ma amalitere m ịmụ akwụkwọ ebe ahụ mgbe anyị mere nri chiiz, mmanụ oliv na ị ,ụ mmanya. , hụrụ n'ezie usoro ha na-elekọta ma na n'ezie? Ime Mmanụ oliv nke ogo dị ịtụnanya Ihe mbụ ị kwesịrị ime mgbe ịzụrụ mmanụ oliv bụ ijide n'aka na ọ na-ebu ụzọ pịa ya ma na-atụkwa ya oyi.
Aga m ekwu okwu banyere nke a na njedebe. Mana mgbe ịzụrụ mmanụ oliv dị mma, ụfọdụ n'ime ihe ị ga-ahụ ebe ahụ, nọmba nke jupụtara na polyphenol. Na polyphenols bụ otu ụdị nke antioxidant nke na - enyere ụbụrụ na obi aka na - enyere cholesterol dị ala aka mgbe ịchọrọ ịbelata ọbara mgbali, mgbe ị bụ eze, iji kwado ụbụrụ gị na ilekwasị anya yana ọbụlagodi igbochi ọrịa ogologo oge dịka Alzheimer na Parkinson's , anyị maara na mmanụ oliv bụ ezigbo nri nri n'ihi polyphenol ndị a, antioxidants ndị nwere abụba abụba, abụba na abụba juputara na acid oleic.
Na ụdị abụba abụba ndị a dị mma maka obi. Ha na-akwado mmezi homonụ ma nyere aka ihota nkwonkwo gị. Ọzọkwa, mmanụ oliv, nri dị ịtụnanya maka sistemụ ndị a niile dị n'ahụ gị.
Nke ikpe azu bu na olile anya juputara na vitamin E. Vitamin E di nkpa maka ahu ike, na vitamin E di nkpa maka aru ike. Ya mere nweta vitamin E, ihe ọzọ dị ezigbo mkpa nke nwere ike ịgbanye mmanụ na-achọta nke ukwuu n'ọtụtụ mmanụ na-amaghị nwoke ọzọ.
Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ imeziwanye ahụ ike nke ụbụrụ, obi, na nkwonkwo na homonụ, mmanụ olive dị mkpa na nri gị. Ma ọ bụ isi ihe dị na ntụgharị uche Anyị ahụla site na ọmụmụ ahụike na ndị soro usoro nri Mediterenian dị elu na mmanụ oliv na azụ ọhịa jidere, nke dị elu na abụba ndị siri ike, nwere obere ọrịa obi. Ya mere, mmanụ oliv ọzọ, oke nri dị ịtụnanya maka ya.
Ugbu a bụ ihicha ya. Ọtụtụ mmanụ oliv taa abụghị ezigbo mmanụ oliv. Ọ dị na. a na-eji mmiri soybean agba ya mmiri, n'ezie enwere nnukwu edemede na ọmụmụ a na-ekwu maka ebe ahụ, mmanụ oliv gị ọ bụ adịgboroja? N'ezie, ị nwere ike ịme nyocha ịntanetị iji chọta edemede m banyere ya naanị chọọ Dr.
Chọọ Axeolive mmanụ adịgboroja. Ọ bụrụ n’ịme nke ahụ, nchọta google ga-ahụta akụkọ m ogologo yana nkọwa niile gbasara ya. Ọbụna m n'onwe m kwadoro usoro ihe omume m maka ịhọrọ mmanụ oliv kacha mma na mmanụ oliv.
Ya mere, naanị Dr. Ax, mmanụ oliv adịgboroja na Google ma ị ga-ahụ ya ebe ahụ. Mana ozo, ihea bu ihe ichoro ime ka ichota oliv oma na nke oma, ka m kwuo nke a, mmanu mmanu mmanu oliv n'ebe ahu n'ihi na o nwere mmanu soybean na genetically modified canola oil ga eme ka oria obi, o ga adi nke ukwuu mkpali Ebe nri Mediterranean na mmanụ oliv bụ mgbochi mkpali ma nwee ike inye aka gbanwee ọrịa.
Mmanụ oliv ọzọ adịgboroja a ga-ebute nsogbu ahụike. Ya mere, lee ihe ị ga-achọ na otu ị ga - esi mara ma ị na - enweta mmanụ oliv dị mma. Nke mbu, ugbu a ị gaghị enwe ike ime ya mgbe ịzụrụ ya, mana mgbe ị nwere ya n'ụlọ, na-anụ ya.
Ọo ya bụ, mu wụ mmanụ olivu a, m nụ ẹnyi, m zịri ahịhịa ọwụ, m na-anụ oliv. Echere m, enwere m ezigbo ya, ọ bụ ezigbo isi na isi na isi nke kwesịrị na mmanụ oliv gị Ol mmanụ oliv kwesịrị inye ya mgbe niile na karama iko, ma ọ bụ ọchịchịrị gbara ọchịchịrị ma ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Otu karama ọchịchịrị kwesịkwara ịdị ebe a.
Ihe ọzọ bụ na mgbe ị tinyere mmanụ oliv gị na ngwa nju oyi, ọ ga-enwerịrị obere ọcha na urukpuru n’ebe ahụ. N'ihi ya, o kwesiri ka o sie ike ebe ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala nweta urukpuru ma ọ bụrụ na ị nwere mmanụ oliv kwesịrị ekwesị. Ya mere tinye ya na friji ọzọ ịmara ozugbo, mepee, ị na-anụ ya.
Kedu ihe ọzọ ị chọrọ karama gbara ọchịchịrị nke dị na atọ. Nọmba nke anọ, ịchọrọ ịchọ mmanụ oliv na-amaghị nwoke. Nke a abụghị naanị ihe ịchọrọ ịchọ, ịchọrọ ịchọ ụma na-amaghị nwoke na ihe ole na ole ndị ọzọ ị ga-achọ, gbalịa zụta mgbe ụfọdụ ma ọ bụ ihe nchịkwa ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala ụlọ ọrụ na-anaghị eji kemịkal.
Chọkwara ị paya ntị na oge owuwe ihe ubi. Kalama a na-ekwu oge owuwe ihe ubi Italiantali na 2014. Ma mgbe ụfọdụ, ọ nwere ụbọchị a kapịrị ọnụ.
N'ezie, mmanụ oliv a kpọmkwem, ọzọ na 2014, oge mgbụsị akwụkwọ n'ebe ahụ. Ọbụna ọ na-ekwu ọnụ ọgụgụ ogbe, yabụ ọ dị ka mmanya uhie. Echere m, ha nwere ya na gbọmgbọm, ha nwere ya na mpaghara ụfọdụ.
Nke a bụ Lot 14L5. Echere m, anyị na-ekwu maka ihe dị mkpa mmanụ oliv, ịchọrọ ya ọzọ, karama iko iko, ịchọrọ mmanụ olive ọzọ, ị chọrọ ka ọ nwee isi ahụ, ịchọrọ itinye ya na ngwa nju oyi ma ọ gbanwere n'ezie urukpuru. Ma ọ bụ gbasie ntakịrị ma ị chọkwara inwe ike ihu ụbọchị owuwe ihe ubi na ụbọchị mmebi na karama ahụ.
Ihe ndị a bụ isi ihe dị na ịchọta mmanụ oliv. Iji zaa ajụjụ gị, mmanụ oliv adịghị mma? Kpamkpam. Mmanụ oliv nwere nnukwu uru ahụike; ọ bụ 'otu n'ime nri kachasị mma n'ụwa.
Ọ dị mma maka obi gị, ụbụrụ gị, homonụ gị, mana ọ ga-abụ nke ezigbo, enweghị ntụpọ, ezigbo mmanụ oliv na-amaghị nwoke. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere uru ahụike nke mmanụ oliv, lelee isiokwu m ọzọ na DrAxe.com.DRAXE.com.
BTW Enwere m ezigbo usoro nhazi dị mma ebe ahụ ma enwere m nri pesto na weebụsaịtị m na ezigbo mmanụ oliv nke ị ga-ahụ n'anya. Naanị gaa DrAxe.com ọzọ ma ọ bụ chọọ Dr.
Axes Pesto na ị ga-ahụ nhazi m na ntanetị ebe ahụ enwere m mmasị na edemede a ma chọọ ịmatakwu banyere nri ọgwụgwọ. Denye aha na YouTube m ebe a. Daalụ maka ikiri ụmụ okorobịa.
Ana m akpọ Dr. Ax, kwuru banyere ọtụtụ uru ahụike nke mmanụ oliv.
Kedu mmanụ kacha sie nri?
Oriri na-edozi ahụ naisi nriọkachamara na-ekweta na otu n’ime ihe ndị kasị vasatail nammanụ dị mmakaesi nrina rie bu olivmmanụ, ọ bụrụhaala na ọ bụ nwa agbọghọ ọzọ. “Want chọrọmmanụa nụchaghị ya nke ọma, ”ka Howard na-ekwu. Ihe e ji mara “nwa agbọghọ na-amaghị nwoke” pụtara na olivmmanụna-adịghị nụchara anụcha, ya mere nke elu mma.Jul 23, 2018
Enwere ụdị mmanụ dị iche iche dị n’ahịa nke na ọ dị mfe ịmegharị ndị dị mma na ndị na-adịghị. Iji mee ka ihe dị mma, mmanụ bụ abụba na calorie nwere abụba ka na-abụ abụba abụba n'agbanyeghị ụdị mmanụ ị na-eji. Ma abụba abụghị onye ọjọọ na nri gị.
Akụkụ ụfọdụ, dị ka obi gị, na-eji abụba eme ihe n'ụzọ bụ isi maka ume, ma enwere nri ndị dị ka omega-3 na omega-6 fatty acids ị nwere ike nweta naanị site na iri abụba. Ọnụọgụ nke ụdị abụba dị iche iche, mejupụtara ihe mmanụ ndị a nwere nwere ike ịdị iche iche, na-eme ka ha dị obere ma ọ bụ nwee ahụ ike. N’isiokwu nke taa anyị na-agwa gị gbasara mmanụ kacha wee dị n’ahịa.
Site na ube oyibo na mmanụ canola na ọtụtụ ndị ọzọ. Ya mere ka anyi bido! dị elu na abụba abụba monounsaturated, gburugburu 70%. Nke a bụ otu n'ime ọkwa kachasị elu nke abụba abụba dị n'etiti mmanụ oriri, nke abụọ na mmanụ oliv.
Nke a na - enyere aka ịkwalite ogo ogo cholesterol dị na ahụ gị ma mekwaa ka ọ dịkwuo mma na ụfọdụ nri yana vitamin E na - ebukwasị ya, nke nwere ike inye aka mee ka anụ ahụ gị na sistemu gị dị ike. Buru n’uche na ọ nwere ike ịdị oke ọnụ karịa mmanụ ndị ọzọ, wdg.
O nwere uto di nro, dika ube oyibo, ma nwee ike iguzogide okpomoku di elu, na-eme ya otu n'ime mmanụ kacha mma iji sie nri ọkụ dị elu, ighe eghe, imi, ighe, ma ọ bụ maka iji akwa salad. Mkpụrụ almọnd: A na-eme mmanụ almọnd site na ịpị-ịpị mmanụ na almọnd ala ma ọ dị n'ụdị edozi na nke a na-emebeghị. N'adịghị ka mmanụ ndị ọzọ a na-eri eri, ọ na-abịa ma ọdịiche dị ụtọ ma na-atọ ụtọ, na-eme mmanụ dị n'ụdị esi nri na usoro nkwadebe Ọ dị elu na Vitamin E, Monounsaturated Fatty Acids, Potassium, na Zinc Na-enyere aka n'ịba ụba cholesterol HDL gị dị mma ma na-agbadata LDL na-emerụ ahụ. , na-akwado ọrụ mgbochi gị na ahụike imeju, na-ebelata ọrịa afọ bowel mgbakasị, na mbenata ihe ize ndụ nke ịrịa eriri afọ.
Mkpụrụ almọnd bụ ìhè, dị ọcha, ma dịkwa nwayọọ y ụtọ, ebe onye a na-akọwabeghị nwere nutty, toast uto na buttery undertones. Anwụrụ ọkụ ya dị elu na-eme ka ọ dị mma maka ịmịcha, ịmịcha, imi ihe, na ihe ọkụkụ ndị ọzọ dị elu. Enwere ike ịmịpụ ha n'ekwughi maka akwa salad, na dips, na na nri esiri esi.
Mmanụ Canola: Emepụtara mmanụ Canola na 1970s mgbe achọpụtara ya na osisi nke mọstad ezinụlọ. A na-ahọrọ osisi ahụ nke ọma iji melite ogo nke Mmanụ, ma ugbu a bụ otu n'ime mmanụ kachasị amasị maka nri vegan. May nwere ike ịma mmanụ a site na aha ọjọọ ya, ebe ọ na-emetụta nri eghe.
Ọ bụghị naanị na ọ bara ọgaranya n'ụdị abụọ nke abụba abụba ndị na-enweghị afọ ojuju, ọ nwekwara otu n'ime ọkwa kachasị ala nke abụba juputara na mmanụ ọ bụla. O nwere uto na-anọpụ iche n'ihi ntakịrị ọkwa nke erucic acid. Ọbụna nke a na-akọwabeghị, mmanụ agbachapụ nwere ebe anwụrụ ọkụ dị elu, na-eme ka ọ bụrụ ezigbo ya Ezigbo ihe oriri maka iwe ọkụ na-ekpo ọkụ.
Ọ bụ ezie na o nwere obere antioxidants ma e jiri ya tụnyere mmanụ oliv, o nwere alpha-linolenic acid, ụdị omega-3 fatty acid. Alfa-Linolenic Acid nwere ike belata mbufụt metụtara na ogbu na nkwonkwo, Inflammatory Bowel Disease, na Cardiovascular Disease Bụrụ ọkọlọtọ ọbara ọbara maka ndị nke ị na-anwa ịrapara na nri nri. N'ihi oke ụtọ na-anọpụ iche, ị nwere ike iji ya maka mmiri, ghee ya ma ghee ya kama ịkpụcha akwa na nri sauteed.
Mmanụ Olive Extra: Site na abụba ndị nwere abụba na antioxidants, yana ọgaranya, dị ụtọ, ọ bụghị ihe ijuanya na mmanụ oliv na-amaghị nwoke aghọwo otu n'ime mmanụ oriri kachasị ewu ewu. Ọ dị elu na polyphenols, ogige antioxidant nwere ihe ndị na-egbochi mkpali, na-enyere aka igbochi kansa, yana ịkwalite ọrụ na nchekwa gị. Ebe ọ bụ na iguzosi ike n'ezi ihe nke EVOO emebiwo obere oge mgbe esiri ya, a na-enweta mmụba ahụike kachasị elu mgbe a riri ya na ụlọ okpomọkụ, dịka akụkụ nke uwe mgbakwasa salad, gbanye n'elu efere ị họọrọ, ọ dịkwa mma maka ịmịcha na ighe na obere okpomọkụ. .EVOO nwere obere anwuru oku nke na-eme ka o sie ike ighe miri emi ma obu juo ogo 375.
Họrọ ahịhịa na-amaghị nwoke nke a na-agwabeghị maka akwa na ngwa ọkụ dị ntakịrị ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ụtọ ya siri ike. Họrọ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, nke a na-akọwaghị, ma ọ bụ nke dị ọcha, otu ngwakọta nke mmanụ ala na mmanụ ndị a nụchara anụcha maka ighe, ighe ma ọ bụ mmiri. Mmanụ flaxseed: Ebe ọ bụ na mmanụ agbakọtara karịa flaxseeds dum, ọ na-enye akụkụ buru ibu nke omega-3 fatty acids.
Mmanụ flaxseed bụkwa nhọrọ magburu onwe ya maka ndị na-arịa ọbara mgbali elu, na ọmụmụ ihe na-egosi na mgbakwunye kwa ụbọchị na mmanụ flaxseed nwere ike belata ọbara mgbali gị ma nwee mmetụta cardioprotective. Ọ dịkwa elu na alpha-linolenic acid (ALA), nke nwere ike belata ihe ize ndụ nke ọrịa shuga, ọrịa kansa, ogbu na nkwonkwo, osteoporosis, ọrịa autoimmune, na nsogbu nhụjuanya. Buru n'uche na ọ nwere ike ịga ọsọ, ọ na-aga ngwa ngwa, yana ọsịsọ ma ọ bụrụ na ị kpoo ya ọkụ, yabụ debe ya na friji ma jiri ya maka obere okpomọkụ dị ka salads na-edozi, ị nwekwara ike ịmịnye ya na oatmeal ma ọ bụ akwụkwọ nri esiri esi. tinyekwara mix na quinoa ma ọ bụ grains ndị ọzọ.Grape mmanụ mkpụrụ: Mmanụ a na-esi ísì ụtọ nke dị nro, nke enwetara site na mkpụrụ vaịn a tụfuru n'oge mmanya na-egbu egbu, nwere pasent dị elu nke polyunsaturated fatty acids na pasent dị ala nke acid jupụta.
Mkpụrụ mkpụrụ vaịn dị elu na vitamin E na antioxidants ma mara ya iji gbochie nje ndị na-emerụ ahụ. Vitamin E bụ ihe dị oké mkpa fatịlaịza mgbe ọ na-abịakwute anụ ahụ ike gị, dịghịzi ọrụ na mgbochi nke oxidative mmebi mkpụrụ ndụ. N’ezie, otu ngaji mmanụ mkpụrụ vaịn na-emepụta ihe ruru pesenti iri na itoolu nke ego a na-atụ aro kwa ụbọchị, na-eme ka ọ bụrụ nnukwu ụzọ iji gboo mkpa gị kwa ụbọchị.
Nnyocha egosiwo na ị na-eri mmanụ grapeseed nwere ike belata ọbara ọbara na-acha ọbara ọbara ma melite nguzogide insulin na ahụ gị. Gbalia iburu ndi anakpo ma obu ndi na achopu ihe ndi ozo dika ihe ndi ozo gunyere nchikota ogwu nke na agbakwunye polyaromatic hydrocarbons na mmanu. Ọ bụghị nanị na mkpụrụ vaịn na-abụ abụba jupụtara na abụba ndị nwere obi dị mma, kamakwa na-eme mmanụ na-anọpụ iche maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ ọ bụla kichin, site na frying na dressings salad.Ọ na-ewepụta mmanụ mkpụrụ tii, nke a makwaara dị ka mmanụ camellia, site na mkpụrụ nke osisi osisi.
Ọ bụ antioxidant siri ike nke nwere ike ichebe gị pụọ na ịka nká na LDL dị ala ma ọ bụ cholesterol ọjọọ na ogo triglyceride. Mkpụrụ mmanụ tii nwekwara ọgaranya na flavonoids dị ka catechins, ụdị polyphenol nke na-ebelata nhazi nke ụdị oxygen, ma ọ bụ ROS.ROS nwere ike ibute ahụ ike gị.
Catechins nwekwara ike inyere aka belata ọbara mgbali gị, dozie cholesterol, ma kwalite ahụike vascular dị na tii na-acha akwụkwọ ndụ, dị ka mgbe ị na-eri mmanụ mkpụrụ tii. Site boosting gị dịghịzi usoro na-eru gị arọ ọnwụ mgbaru ọsọ, tii mkpụrụ mmanụ ga na-akwado ahụ ike gị na ịma mma si n'ime pụọ. Dị ka mmanụ oliv, mmanụ mkpụrụ tii nwere ụdị abụba acid yiri nke ahụ, nke gụnyere isi nke oleic acid, mana ọbụna ihe ndị ọzọ na-eme ka omega-3 fatty acids nwere phytonutrients, mmanụ mkpụrụ tii bụ ọgaranya nke vitamin E, A, na B.
Mkpụrụ dị ka calcium, magnesium, phosphorus, iron, na Manganese dị na mmanụ mkpụrụ mmanụ bụ ihe ndị dị mkpa na mmeghachi omume enzymatic na ahụ gị. Mkpụrụ mkpụrụ tii na-enwe polyphenol pụrụ iche dịka triterpenes, saponins na kaempferol nwere mmetụta mgbochi mkpali ma chebe megide nrụgide oxidative. Anwụrụ ọkụ dị elu na-eme ka ọ bụrụ ihe dị iche iche maka mmiri, ịchafụ, ighe miri emi ma ọ bụ ọbụna dị ka nri salad.
Mmanụ osikapa bran: Mmanụ nke osikapa nwere vitamin E tocotrienols, nke nwere ike belata LDL cholesterol gị, belata mbufụt ma belata ihe egwu nke kansa. O jupụtakwara na vitamin K, nke na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịkpụchi ọbara, metabolism ọkpụkpụ, na nhazi. A na - ewepụta ya na nje na osikapa osikapa, ọtụtụ ụdị na - amịpụta kemịkal.
Mgbe ịzụrụ, chọọ ụdị mkpụrụ oyi na-adịghị ewe iwe n'oge mmịpụta. Ọ bụ ìhè ma dị ọcha, na a ọhụrụ, na-anọpụ iche uto na ịchọ nlezianya okpukpo. Nwere ike iji ya maka frying, grilling, amịkpọ ma ọ bụ na-atụgharị n'elu oke ọkụ ma ọ bụ na ejiji dị ka Mayonezi ma ọ bụrụ na achọrọ uto na-anọpụ iche.
Mmanụ a Coụ na-enweghị ntụpọ: Akara mmanụ akachasị abụba jupụtara, nke na-eme ka ọ kwụsie ike. O nwekwara triglycerides ọkara, ma ọ bụ MCTs, bụ isi iyi nke abụba na-agbanwe n'ime ike ngwa ngwa. Dị ka ihe kwukwara uru, aki oyibo mmanụ nwere ihe antimicrobial onyinye a na-akpọ lauric acid, nke bụkwa bara uru n'ihi na ahụ Akara oyibo mmanụ na-e gosiri na-enyere na arọ ọnwụ.
Mmanụ aconutụ na-enweghị ntụpọ nwere ebe anwụrụ ọkụ dị ala, na-eme ka ọ dị mma maka ịmịcha mkpụrụ akụ oyibo, nke ọtụtụ n'ime gị nwere ike ọ gaghị amasị. Ahụekere Ahụekere: brainbụrụ gị mejupụtara oke abụba acid, ị ga-achọkwa ọtụtụ n'ime nri gị kwa ụbọchị iji rụọ ọrụ na iche echiche nke ọma. N’ime mmanụ niile a na-eri na ndepụta a, mmanụ ahụekere nwere abụba abụba kachasị elu na ọkara.
Ebe ọ bụ na abụba ndị a na-ejikọkarị ọnụ, a na-ahụta ya dị ka nri ụbụrụ nke na-eme ka ncheta gị, ọnọdụ gị, na nche gị dịkwuo mma. N’adịghị ka mmanụ ndị ọzọ a na-eri eri, mmanụ ahụekere enweghị kọlestrọl ma ọlị, n’agbanyeghi na ọ nwere ihe dị ukwuu na phytosterol, ọmụmụ ihe egosila na ọ nwere ike belata ọkwa cholesterol site na pasent 10-15. You nwalewo nke ọ bụla n'ime mmanụ ndị a? Kedu mmanụ dị mma maka gị? Ka anyị mara na ihe ndị a n'okpuru!
Kedu ihe kpatara na ịkwesighi iji mmanụ olive na-amaghị nwoke mee nri?
Isi Okwu. Ogommanụ oliv na-enweghị atụbụ abụba dị mma nke na-ejigide agwa ya bara uru n'ogeisi nri. Ihe kachasị mma bụ na ikpo oke ọkụ nwere ike imetụta uto ya n'ụzọ dị njọ. Otú ọ dị,mmanụ olivna-eguzogide ọgwụ ọkụ ma ọ bụghị oxidize ma ọ bụ na-aga rancid n'ogeisi nri.Ọnwa Iri 23, 2018
Ọ Dị Mma iji mmanụ oliv kwa ụbọchị?
Mmanụ olivbara ọgaranya n'ụba abụba ma nwee ọtụtụ uru ahụike, na-eme ka ọ bụrụgbasiri ikemgbakwunye na nri kwesịrị ekwesị mgbe ejiri ya na-eri nri. Mgbe nile na-ewemmanụ olivnwere ike inyere gị aka iru oriri a tụrụ aro makagbasiri ikeabụba ma nwee ike ịbara ahụ ike gị uru n'ọtụtụ ụzọ.Juni 21, 2019
Enwere m ike ị were mmanụ oliv tupu ị lakpuo ụra?
Fọdụgaikwusa uru nke ị drinkingụ mmanyammanụ olivihe mbụ n'ụtụtụ. Ndị ọzọ na-a swearụ iyi site na uru nkena-ewere mmanụ olivn'abalịtupu ị lakpuo ụra. Ndị na-akwado ụtụtụ na-ekwu nana-ewerea gbara nke na-amaghị nwokemmanụ olivna ihe efu afo jumpstarts mgbaze ma na-enye ezigbo absorption gị usoro.Ọnwa Ise 20, 2020
Ọ dị mma ị drinkụ mmanụ oliv kwa ụbọchị?
Mmanụ olivbụgbasiri ikeabụba nke nwere ogige mgbochi mkpali.Na-arinụọ nwere ike ịbara obi gị, ọkpụkpụ gị, na ahụike gị uru mgbe niile ma nyere aka mee ka ogo shuga dị n'ọbara gị dị mma.Juni 21, 2019
Kedu mmanụ kachasị mma maka ighe miri emi?
Anyị n'ozuzu na-anwa iru abụba abụba mgbe anyị na-ighe. Abụba ndị a dị mma bụ mmiri mmiri na ụlọ okpomọkụ (ma e jiri ya tụnyere abụba jupụtara dị ka mmanu abuba, bọta na aki oyibommanụndị siri ike na ime ụlọ temp). Favoritemụ abụba kachasị mma anyị nwere maka pan-ighebụ ube oyibommanụ, canolammanụna olivmmanụ.Ọnwa Iri na Otu 13, 2019
Ọ bụ na-adịghị mma ka ịgbanye na mmanụ oliv?
Mmanụ olivdị ezigbo ike n'ozuzu ya, ọbụlagodi n'ọnọdụ ndị siri ike dịka frying miri emi. Ọtụtụ ọmụmụ ekpugheremmanụ olivka okpomoku di ogologo oge. Ọbụna n'ọnọdụ ndị dị otú ahụ jọgburu onwe ya,mmanụ olivanaghị emepụta ọtụtụ ihe na-emerụ ahụ.Ọnwa Iri 23, 2018
anyịnya igwe na-efu ọnwụ tupu na mgbe
Anyị enwere ike isi nri akwụkwọ nri na mmanụ oliv na-amaghị nwoke?
Yabụ, ọ bụrụ na ị na-anụ gịnrina oven na 180 Celsius C, gịmmanụ oliv na-enweghị atụzuru oke dị ka ọ nwere ebe anwụrụ ọkụ dị n'elu nke a. Họrọ ihemmanụna ebe anwụrụ ọkụ dị elu karịa 220 Celsius C adịghị mma ọ bụla. Ọtụtụ ezigbo ọmụmụ ihe egosila nkwụsi ike nkemmanụ oliv na-enweghị atụn'ogeisi nri.
Nwere uru ahụike dị na iri mmanụ olive na-amaghị nwoke?
Ọtụtụ - ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ narị - ọmụmụ na-egosi na mmanụ oliv na-amaghị nwoke nwere uru dị ike maka obi gị. Ọ bụrụ na ị nwere ọrịa obi, akụkọ gbasara ezinụlọ nke ọrịa obi ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nwere ike ịkpata nsogbu, ị nwere ike itinye ọtụtụ mmanụ oliv na-amaghị nwoke na nri gị. Na nchikota mmanu oliv na-amaghi aru nwere otutu uru di na obi.
Gini mere mmanụ olive ji dị mma maka Obi Gị?
Nwere ike irite ahụike ahụike. Ọ dịwo anya a kwenyere oliv dị ka abụba dị mma nke nwere obi. Otu ihe echere na ọ ga-ekere òkè n'ịkwado ahụike obi bụ oleic acid, ụdị abụba na-enweghị atụ
Kedu ụdị mmanụ oliv kachasị mma?
Mmanụ oliv ọzọ bụ naanị mmanụ oliv nke na-ejigide ihe ọ bụla sitere n'okike (ụdị antioxidant), yana ogige ndị ọzọ na-edozi ahụ. Ọ bụ nhọrọ kachasị dị nro, dị ka nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, nke dị ọcha, ma ọ bụ nke dị nfe abụbaalarị nke ọma ma mekwaa ka ọ ghara ịdị mma.